Liverpool Oo Ku Dhaw Dhamaystirka Saxiixii 4-aad Ee Xagaaga | Somalia News
Kooxda Liverpool ayaa lagu soo waramayaa in ay isku diyaarinayso in ay dhamaystirto saxiixa xiddiga garabka uga ciyaara Watford ee Ismaila Sarr Sida ay sheegayaan wararku.
Kadib markii ay dhamaystireen saxiixa Diogo Jota todobaadkan waxa la sheegayay in ay Liverpool isaga hadhay dadaalkii ay ku doonaysya saxiixa xiddiga Ismaila Sarr.
Laakiin wargayska France Football ayaa sheegaya in ay kooxdu si Rasmi ah heshiis ugala gaadhay Wolves saxiixa xiddiga Ismaila Sarr.
Wararka ayaa sheegaya in ay Kooxda difaacanaysa premier League lacag dhan 36 milyan oo euro kala heshiisay saxiixa xiddiga 22 jirka ah.
Isla wargayska ayaa sheegaya in ay Liverpool xiddigo iska iibin doonto isla marka ay dhamaystirto saxiixa xiddiga reer Senegal ee Ismaila Sarr.
Previous articleMadaxweynaha Maxkamada Dunnida Cabdiqawi oo khudbad kasoo jeediyey Shirweynaha UN-ka – VIDEO
Next articleBritain oo ku dhawaaqday xayiraado cusub oo COVID-19 looga hortagayo